जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? नेपाल बैंकले माग्यो ३९६ कर्मचारी,कुन प्रदेशमा कति ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? नेपाल बैंकले माग्यो ३९६ कर्मचारी,कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले सालतै प्रदेशमा दरखास्त आह्वान गरेको छ। बैंकका अनुसार लोकसेवा आयोगको सहमति अनुसार २०७५\_७६ का लागि रिक्त दरबन्दी आह्वान गरेको जनाएको छ। बैंककाअनुसार सहायक प्रबन्धकमा खुला, महिलालगायत ७८ जनाको पद रिक्त रहेको जनाएको छ भने सहायक प्रबन्धक (आईटीमा) दुई जनाको दरखास्त आह्वान गरिएको छ। सहायक प्रबन्धकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने जनाइएको छ।
बैंकले सहायक पदका लागि प्रदेश एकबाट ४१ जनाको दरखास्त आह्वान गरेको छ। कनिष्ठ सहायक पदमा नौ जनाको माग छ। प्रदेश दुईमा ५१ जना सहायक र नौ जना कनिष्ठ सहायकको माग छ। प्रदेश ३ मा क्रमशः ५८ सहायक र १५ कनिष्ठ सहायक माग गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा ३४ सहायक र पाँच कनिष्ठ सहायकको माग छ। बैंकले प्रदेश पाँचमा ३४ सहायक र ५ कनिष्ठ सहायकमाग गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा २० सहायक र तीन कनिष्ठ सहायकको माग छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि २० सहायक र तीन कनिष्ठ सहायक माग गरिएको छ। दरखास्त कार्तिक १६ गतेदेखि मंसिर ६ गतेसम्म दिन सकिने छ। त्यस्तै दरखास्त अनलाइमार्फत समेत दरखास्त दिन सकिने छ। अनलाइनबाट दरखास्त दिँदा आफूले चाहेको प्रदेश राख्न सकिने बैंकले जनाएको छ। परीक्षा सबै प्रदेशमा एकै मिति र समयमा सञ्चालन हुनेसमेत बैंकले जनाएको छ।
चितवन, ५ जेठ - भरतपुर महानगरपालिका–२५ शुक्रनगरमा गएराति एक घरका परिवारलाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएर लुटपाट […]
नेपालमा ७५ नभर्इ अब ७७ जिल्ला कायम हुने
भदौं ८, काठमाडौं । हालसम्म नेपाल अधिराज्यभर ७५ जिल्ला रहेकोमा अब भने ७७ जिल्ला कायम हुने भएको छ । […]
गोलभेडाको मूल्य दोब्बरले वृद्धि,किन महँगियो गोलभेडा ?
काठमाडौं । एक महिनाको अन्तरालमा गोलभेडाको मूल्य दोब्बरले वृद्धि भएपछि सामाजिक सञ्जालमा गोलभेडा काण्ड […]
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा आइतबार थप १६६ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या […]